Midira sy mampivoatra ny rindranasao amin'ny Firefox OS | Avy amin'ny Linux
Midira sy mampivoatra ny rindranasao ho an'ny Firefox OS
Raha toa ianao ka developer ary liana amin'ny haitao web ianao, tsy azonao adinoina ilay Firefox App Days, andiana hetsika izay hitranga mihoatra ny Tanàna 20 eran'izao tontolo izao hanampy anao hanomboka hamolavola rindran-tranonkala ho an'ny Firefox OS.
Amin'ity hetsika ity dia hanana fotoana hianarana ianao, handefasana programa sy hankafizanao ny Firefox OS, ny rafi-piasana open source Mozilla ho an'ny tranonkala misokatra finday.
Ireo mpamorona Mozilla dia hanolotra ireo fitaovana sy teknolojia namboarina mba hanitarana sy hanohanana ny sehatra Web, ao anatin'izany ny API API hiditra amin'ny fampiasa amin'ny fitaovana toy ny accelerometer Izy io koa dia hampiseho ny fomba fampiasana ny Firefox OS simulator hijerena sy hizaha toetra ny rindranasa finday amin'ny birao birao.
Ny Firefox OS App Days no fotoana hanombohanao mamorona rindranasa ao amin'ny tsenan'i Firefox, ary misolo tena ny fotoana lehibe handraisana anjara fampiharana vaovao sy hanatsara ny fisie HTML5 efa misy ho an'ny Firefox OS, ary koa hanehoana ireo tetik'asa amin'ireo mpiara-miasa aminao.
2 Ahoana no hiomanana
Ny Firefox OS App Days dia hanomboka amin'ny 19 Janoary ary hitohy hatramin'ny 2 Febroary, na dia ny 26 Janoary aza ny ankamaroan'ny hetsika.
Any amin'ny firenena miteny Espaniôla dia hikarakara hetsika efatra i Mozilla, hatao ao Bogotá any Kolombia (mpandray anjara 90), Madrid y Barcelona any Espana ary Buenos Aires any Arzantina (mpandray anjara 100).
Miovaova ny fahaizan'ireo, fa amin'ny ankapobeny dia voafetra ho 100 ny vahiny. Tsy maintsy alohan'ny fisoratana anarana.
Ahoana no hiomanana
Ento ny milina fivelaranao (Linux, Mac na Windows) ary hevitra momba ilay rindranasa tianao hamboarina ho an'ny Firefox Marketplace. Raha manana fitaovana Android ianao dia azonao raisina ihany koa (indrindra raha mifanaraka amin'ny Firefox amin'ny Android ny fitaovanao).
Raha te-hanomboka ny fivoaranao alohan'ny hetsika ianao dia azonao atao ny mijery ireto manaraka ireto ary mitondra rindranasa HTML5 izay natombokao ary tianao hotohizana, amin'izay dia afaka mahazo hevitra ianao ary mahazo mpamorona hafa hanampy anao.
loharanom-baovao: Mozilla Hispanika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Midira sy mampivoatra ny rindranasao ho an'ny Firefox OS
Ny KDE 4.10 dia hanana fanohanana amin'ny fampidirana ny bokotra menio amin'ny tsanganana lohateny
II Mametraka Party Junior ao Madrid